आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीलाई आज यसरी ल्याउँदै छ काठमाडौं| Nepal Pati
डा. गोविन्द केसीलाई आज यसरी ल्याउँदै छ काठमाडौं
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखी १२ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले एयरलिफ्ट गरेर काठमाडौं लैजाने तयारी गरिरहेको छ । केसीको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्तै नाजुक बनेपछि सरकारले हेलिकप्टर जुम्ला पठाउन लागेको हो ।
यसअघि केसीको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली जुम्ला पठाएको थियो । तर, केसीले उनीहरूबाट उपचार सेवा नलिने जनाएपछि टोली फर्किएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक सक्षम भएकाले उनीहरूले नै आफ्नो उपचार गर्ने केसीले बताएका छन् । कान्तिपुरबाट